Col Xasan Maxamed Nuur (Shaat-gaduud) oo ku geeriyoodey dalka Jarmalka.(Dhegayso) – Radio Daljir
Abriil 3, 2013 7:18 b 0
Berlin, April 3, Col Xasan Maxamed Nuur (Shaat-gaduud) oo xilal kala duwan kasoo qaybtay dalka Soomaaliya ayaa xalay ku geeriyoodey dalka Jarmal ah oo in mudo ah uu u joogey xaalad caafimaad sida ay xaqiijisay Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya.
Shaati Gaduud oo kasoo jeeda goboladda Baay iyo Bakool ayaa xilil kala duwan kaasoo qabtay dalka Soomaaliya, Xukuumadii Milateriga ahayd ee uu hogaaminayey AUN Maxamed Siyaad Barre ayuu kasoo noqday Sarkaal ciidamada nabadsugida ah, Gudoomiye Degmo iyo Gudoomiye gobolk intaba.
Col Xasan Maxamed Nuur ayaa lagu xasuustaa kaalintii uu ku lahaa xoraynta magaalooyinka Baydhabo iyo Xudur xiligii ay duulaanka ku qaaday Jabhadii USC ee uu hogaaminayey Maxamed Faarax Caydiid xiligaas oo boqolaal shacab ahi ay ku dhiteen goboladaasi.
Marxuumka ayaa kamid ahaa saraakiishii hogaaminaysey Jabhadii Rahenweyn Resistance Army ( RRA ) oo sanadii 1999 magaalada Baydhabo ka saaray Jabhadii USC ee uu hogaamin jirey Gen Caydiid.
Shaatiguud wuxuu sanadii 2000 ka qayb galay shirkii magaalada Carta kaga qayb galay shirkii lagu soo dhisay Dawladii KMG ahayd ee uu hogaaminayey Md Cabdulqaasim Salaad Xasan .
Sidoo kale Col Shaatigaduud ayaa kamid ahaa golihii Wasiiradda ee Dawladii M/weyne Cabdilaahi Yuusuf isagoo 2005 ilaa 2007 kasoo noqday Wasiirka Beeraha.
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Xasan Maxamed Nuur (Shaati-guduud) ayaa xalay ku dhintay isbitaal ku yaalla dalka Germany oo uu ku xanuunsanayay maalmihii la soo dhaafay, sida ay tebisay warbaahinta dowladda Soomaaliya.
Xildhiobaan C/casiis Afar Indhood oo ka mid ah baarlamaanka Soomaliya ee kasoo jeeda gobolada Baay iyo Bakool ayaa Radio Daljir uga waramay taariikhda Marxuumka .
Halkan ka dhegayso hadalka Xildhibaan Afarindhood
AUN Marxuum Shaatigaduud ayaa xalay ku geeriyoodey Cusbital kuyaala magaalada Berlin ee dalka Jarmal ka oo mudooyinkii danbe uu xaalad caafimaad u joogey.
Maamulka Radio Daljir oo si KMG ah u joojiyey baahinta Radio Ergo iyo Hirad.(Warsaxaafadeed)